Fez • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Fez na Fes dia tanàna any avaratr'i Morocco atsinanana ary renivohitry ny faritany fitantanan'i Fas-Meknas. Io no tanàna faharoa lehibe indrindra any Maroc aorian'ny Casablanca, misy mponina 1.7 tapitrisa (2020). Any avaratra atsinanan'ny tendrombohitra Atlas, Fez dia miorina eo amin'ny sampanan-tanàna amin'ireo tanàna manan-danja amin'ny faritra rehetra; 206 km (128 mi) avy any Tangier ka hatrany avaratra andrefana, 246 km (153 mi) avy any Casablanca, 189 km (117 mi) avy any Rabat mankany andrefana, ary 387 km (240 mi) avy any Marrakesh mankany atsimo andrefana izay mankany amin'ny Trans -Ny lalam-barotra varotra.
Sandam-bola Maraokana dirham